Vaovao - kasety foil aluminium izay mbola tsy nampiasanao
Kasety foil aluminium izay mbola tsy nampiasanao
Raha resaka kasety foil vita amin'ny aliminioma dia mino aho fa tokony hahafantatra azy rehetra isika, satria matetika io dia hita amin'ny sokajy fitaovana ao an-trano.
Voalohany indrindra, ny fantsom-bozaka vita amin'ny aliminioma dia vita amin'ny dity mora tohina amin'ny tsindry, miampy ny toetoetran'ny fanoherana ny hafanana avo lenta amin'ny alim-pito, tsy azo ovaina, noho izany dia misy vokany tsara ny insulation, fa misy koa toetra mampita taratra, amin'ny fiainantsika, fatana, microwave lafaoro no hosorana. Mazava ho azy, betsaka ihany koa ny rindranasa ao amin'ny indostrian'ny fiara.
Etsy ambany no hahitanao ny sasany amin'ireo vokatra foil aluminium lehibe.
(A) kasety foil vita amin'ny aluminium vita amin'ny aluminium mahazatra
Ity vokatra ity dia vokatra mahazatra eny an-tsena, viscosity tsara, insulation tsara, fiadiana fiarovana elektromagnetika. Ampiasaina indrindra ho an'ny fiarovana elektromagnetika amin'ny karazana vokatra elektronika isan-karazany, sy ny insulated hafanana amin'ny fitaovana ao an-tokantrano sy ara-barotra.
(B) kasety foil vita amin'ny alimo tokana sy misy lafiny roa miaraka amin'ny fanamafisana
Ity vokatra ity dia fitaovana mitambatra miaraka amin'ny fanamafisana ny kofehy vita amin'ny kofehy eo anelanelan'ny foil aluminium sy ny taratasy kraft, izay misy ny asan'ny kasety foil vita amin'ny aliminioma mahazatra, fa koa ny tsy tantera-drano, ny porofo ary ny insulation ny hafanana. Izy io dia ampiasaina amin'ny insulation pipeline, ivelan'ny fiarovana ny fitaovana fanafanana sy ny fampangatsiahana ary ny insulateur an'ny trano sy hotely.
(C) kasety vita amin'ny alimo vita amin'ny alimo vita amin'ny vera
Ity vokatra ity dia vita amin'ny alim-pito alimika sy lamba vita amin'ny vera aorian'ny fitambaran-tsolika, miaraka amin'ny fahombiazan'ny sakana etona rano, ny fahombiazan'ny fanoherana ny okididra, ny fanoherana ny asidra malemy sy ny alkaly, ny porofo mipoaka ary ny fiaretan'ny lelafo. Ampiasaina indrindra amin'ny famehezana ny fantsona sy ny fananganana sosona taratra ao amin'ny rafitra fanamafisana ny tany.
(D) kasety foil vita amin'ny alim-pito
Tselatra kilasy retardant misy kilasy miaraka amina foil aluminium madio ho fitaovana fototra, lakaoly ho an'ny retardant mirehitra, ary avy eo miaraka amin'ny fahombiazan'ny taratasy fanokanan-tsilona fotsy toy ny fitambaran-tsipika. Miaraka amin'ny tanjaky ny paiso avo, ny firaiketam-po voalohany, ny firaiketam-po, ny toetra mampiorina ny lelafo tsara. Mety amin'ny fantson-drivotra, rindrina, ary insulite vy, ary koa insulation fiara sy fiaran-dalamby, insulated pipes sambo, sns.
(E) kasety mainty vita amin'ny alimo vita amin'ny aluminium
Raha ny mpiasa amin'ny tontolo miasa lava eo amin'ny mason'olombelona dia tsy hahatsapa harerahana, ny ambonin'ilay mampiasa coating mainty. Izy io dia manana ny asan'ny fidirana hazavana, ny fandraisam-peo, ny hamandoana, ny fanoherana ny harafesina, ny hafanana, ny fitehirizana ny hafanana, ny fandrehitra ny lelafo, sns. Izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny ins insulateur ho an'ireo efitrano fanasana sy ireo efitrano fampisehoana.
(F) kasety sarimihetsika vita amin'ny aliminioma
Ity vokatra ity dia rakotra fonosana amin'ny alimo vita amin'ny aliminioma amin'ny sarimihetsika, insulation thermal, anti-corrosion, fiarovana elektrômanetika, fananana matanjaka mahery. Ampiasaina indrindra amin'ny haingon-trano anatiny, fanontana vita amin'ny orinasa ary tontolo iainana hafa.